Gothic Thriller 'Broil' Oo Loo Diyaariyey Siideynta Oktoobar Mareykanka
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Gothic Thriller 'Broil' Oo Loo Diyaariyey Siideynta Oktoobar Mareykanka
by Timothy Rawles Waxaa laga yaabaa 1, 2020
Well Go USA madadaalo ayaa keenaya Canadian xiisaha gothic Broil Mareykanka ilaa Oktoobar.
Waxaa lagu sifeeyay sheeko "umuuqata mid soo jireen ah oo fac-weyn", Broil runti waa wax aad u madow.
Kaddib dhacdo gacan ka hadal ah oo ka dhalatay nacayb iskuul oo aan loo dulqaadan karin, Chance Sinclair oo 17 jir ah (Avery Konrad) ayaa loo diray inay la noolaato awoowe (Timothy V. Murphy) ee gurigiisa buuraha badan. Markay doonayso inay daah furto asalka dhabta ah ee awoowgeeda dabiiciga ah ee hantida xad dhaafka ah - iyo xaalad caafimaad oo layaableh oo xagga qoyska ah oo ku socota jiilalka dambe - waxaa laga yaabaa inay hesho waddo ka badan tii ay ku iibsatay. Si dhakhso ah ayey udhaxeeyaan labada koox ee isku haya qoyska, rajada kaliya ee badbaadada ayaa laga yaabaa inay sifiican uga timaado dil-kireyste (Jonathan Lipnicki) oo leh garaacis maskaxeed ee caqliga cunnada. ”
Edward Drake, agaasime iyo wada-qoraa MADAXWEYNE ayaa sheegay inuu u mahadcelinayo qof kasta oo ka soo shaqeeyay filimka.
"MADAXWEYNE waxaa abuuray Vancouver iyo Fiktooriya cajiib ah iyo shaqaalihii, "ayuu yidhi. Waxaan tilmaamo ka qaadanay Rosemary's Baby, Saaxiradku, Bax, Guusha, Barry Lyndon, Adiga Ayaa Ku Xiga, iyo qaar kaloo badan oo la keenayo MADAXWEYNE nolosha, waa sheeko runti 100% ku saleysan dhacdooyinka runta ah.
Qoraa-wadaaga Piper Mars wuxuu sharxayaa filimku sidoo kale inuu aad uga badan yahay sheeko naxdin leh. “MADAXWEYNE wuxuu baaraya siyaabaha qoysasku isu waxyeeleeyaan. Waxaan rajeynayaa filimku inuu ku casuumayo daawadayaasha inay wax ka weydiiyaan sirta aan loo baahnayn iyo khilaafka noloshooda ku jira. ”
Sii deynta dijitaalka ah iyo madadaalada guriga ee Broil waxaa loo qorsheeyay Oktoobar 13, 2020
Filimkan waxaa Director ka ah Edward Drake, waxaana qoray Edward Drake iyo Piper Mars (Gabadha Yar) waxaana soo saaray Corey Large (Waxay Raacdaa, Ninka Nofeembar).
'Xun xun' Dib u Xasuusinta Raadinta waxay wada shaqeyn lahaayeen Ash Williams iyo Mia
Filimka 'Diablo Rojo PTY' Panama filimkiisii ​​ugu horreeyay abid naxdin leh ayaa dhigaya Taariikhda la sii dayn doono